आफ्नै हातले टेरारियम
एक पालतू सुरू गर्नु अघि, तपाईले यसको पोषण, सर्तहरू र जीवनका स्तरहरूको बारेमा यथार्थको बारेमा जान्न आवश्यक छ। ठुलो रगतयुक्त रित्तिलाहरू र एम्फिबियन्सहरू (टाउकोहरू, मगरमण्डलहरू, कछुएहरू) राख्ने विशेष टारियसहरूमा प्लाईवुड, कण बोर्ड, पेप्सीगुलासहरू। एक धेरै महत्त्वपूर्ण घटक नमी र तापमानको अवस्थाको सही छनौट हो।
टेरारियम को प्रकार
एक ऊर्ध्वाधर टेरारियम जानवरहरुको लागि उपयुक्त छ जो काठ को जीवनशैली को नेतृत्व गर्दछ, उदाहरण को लागि चैमोन , इगुआना, केहि सांपहरु। क्षैतिज प्रकार को लागी धरती आक्रामक , geckos, छेड़छाड़, को लागि हो कि यो जानवरहरु को लागि पृथ्वी मा अधिकतर भाग को लागि प्रकृति मा रहछन। क्यूब को रूप मा भिन्नता सार्वभौम छ, किनकी यो लगभग सबै केहि फिट बैठता छ, किनकि जमीन मा रहन वाला रिक्तियां शामिल हो। यदि तपाइँसँग केमैन वा पानी कछुआ छ भने, तपाईंले पानीको एक्वैरियमलाई आवश्यक पर्दछ।
कसरी कछुआको लागि एक ताराराम बनाउने?
कछुआ टेरारियम कसरी लैजान्छ? यो धेरै सरल छ। यदि तपाईंको कछुए एक स्थलीय मध्ये एक हो भने, अर्थव्यवस्था को लागी तपाईं plexiglass बाट एक ताररहित बनाउन सक्नुहुन्छ, तर प्लाईवुड देखि। ठूलो क्षमता, पालतू को लागि राम्रो। यस अवस्थामा, हामी आयाम 87h47h48 सेन्टीमिटरको साथ एक उत्पादनको निर्माण गर्न जान्छौं।
याद गर्नुहोस् कि सबै सामग्रीहरू पारिवारिक अनुकूल हुनुपर्छ। तल्लो र तीन पर्खालहरु लाई प्लाईवुड देखि बनाइनेछ, कांच को बने सामने वाला भाग। हामी पानी को आधार मा 87x47 सेमी र तरल नाखून को आधार मा लेता छ।
उपकरणको रूपमा, तपाईंलाई "चिपकने वाला" बन्दूक, एक शिकारी र एक सानो ड्रिलको आवश्यकता पर्दछ।
गोंदको आधारमा, र त्यसपछि प्रत्येक पक्षबाट पट्टीमा कील। तिनीहरू समर्थनको रूपमा सेवा गर्नेछन्।
विशेष कुनाहरू पछाडि साइड पर्खालहरू मिलाएर सुरू गर्नुहोस्।
जब पक्षहरूको स्थापनाको साथ समाप्त भएमा, पीछेको पर्खालमा जानुहोस्: तरल ग्लू र फास्टनरको रूपमा शिकंजा प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंसँग शीर्ष आवरण गर्न आवश्यक छ भने तपाईसँग, बिरालोहरू, कुत्तहरू, चराहरू।
हामी दोस्रो फ्लोर बनाउँछौं, ताकि बारहरू दृश्य खराब गर्दैनन् र पशुसँग हस्तक्षेप गर्दैनन्। तीन साना स्लेटहरू लिनुहोस्, तिनीहरूलाई ग्लुलो र माथिबाट "रोपण" प्लाईवुड, जुन केही मिलिमिटरमा पहिलेदेखि नै कम हुनेछ। यो गिलासको सही माउन्टको लागि आवश्यक छ।
ग्लुमा हामी रेल जोड्छौं, जुन चश्मा चल्छ।
यो वेंटिलेशन बनाउन आवश्यक छ। यसको लागि, पक्षमा2प्वालहरू काटिएका छन्।
प्लाईवुड एक फिल्मको साथ पेस्ट गर्न आवश्यक छ जुन एउटा रूखको अनुकरण गर्दछ।
पछाडि प्यानल एक रूखको ओवन-सूखे छालको साथ समाप्त हुन सक्छ। त्यही तरल नाकहरूसँग धकेल्नुहोस्।
यदि तेरारियम मा एक गरमीपदीप दीपक छ, यसलाई प्लेटफॉन्ड संग सुरक्षित राख्नुहोस।
तपाईं पनि फर्शमा चलचित्र गन सक्नुहुन्छ।
मंजिल शविंग्स संग कवर गरिएको छ। प्राप्त:
टिप्पणीको लागि दृश्यहरूको यो संस्करण लिनुहोस्।
एक ताजा पानीको लाल-कछुवाले कछुआको लागि एक टेरारियम एक एक्वैरियम जस्तै हुनुपर्छ।
अष्ट्रेलिया रेशमी टेरियर
फिन कवक - एक साधारण एक्वैरियम मा उपचार
बिरालोको लागि सजिलो
साथीहरु कुकुरको अधिनियम
प्रीमियम बिल्लियों को लागि फीड - दर्जा
कोण कोरोको नस्ल
एक कुत्ता उपचार मा दस्त, लोकप्रिय उपचार को एक सिंहावलोकन
गिनी पिगको सेक्स कसरी निर्धारण गर्ने?
पिडा गर्न कसरी पिल्ला सिकाउने?
कतिजना प्रत्यक्ष तोतहरू छन्?
रुसी रंगीन गोल्डडोग
चामिडीया बिल्लियों - लक्षणहरू
डाईरामा कुखुरा - घरको उपचार
Liv Tyler न्यू यॉर्क को आफ्नो परिवार संग सडक मा हिंड्छ
कागजको ढोका कसरी बनाउने?
भ्रम - मनोविज्ञान मा धारणा को भ्रम र कसरी भ्रम मा रहन रोक्न को भ्रम हो?
आहारको लागि कम-मोटो माछा
माइला जोभोभिकले आफ्नो छोरीको बारेमा एक साक्षात्कार गरे
सपना व्याख्या - रक्त र व्याख्या को खूनी सपनाहरु
Viburnum बाट जाम
वाइकिंग जहाजहरूको संग्रहालय
व्यावसायिक फोटो शूट
20 औं शताब्दी को सबै भन्दा सुन्दर पोती पंथ को आंकडाहरु को शीर्ष 10
ओसेटियन पाईका लागि नुहाउनका लागि विभिन्न भित्ताहरू
Trampoline मा कूद र राम्रो छ
स्लोचकोवा लाल रातो कपडामा
बच्चा मा हिजेरिया
मेगगोट रोबी मेकअप बिना
रेडिकल भोल्युमको लागि दोष
प्राकृतिक अनुहार मास्क
पहिलो मिति विफल गर्न 15 तरिका